जीवनशैली – Page2– SabKura Samachar
शरीरमा रगतको कमी भयो भने शरीर कमजोर हुन्छ । शरीर सुस्त हुन्छ, अनुहार न्याउरो हुन्छ र हड्डी कमजोर हुन्छ । शरीरमा रगतको कमी किन हुन्छ ? शरीरमा रातो रक्त कोशिकाहरुको कमी हुनाले एनोमिया अर्थात् रगतको कमी हुन्छ । रातो रक्त कोशिकाहरु नष्ट हुनु, शरीरबाट धेरै रगत बग्नु अथवा शरीरद्वारा पर्याप्त मात्रामा रातो रक्त कोशिकाहरु निर्माण …
शरीरमा रगतको कमी भएमा के खाने ? Read More »
एयरफोन : रोगको कारण त बनिरहेको छैन ?
सन् १९१० मा पहिलो पटक एयरफोन प्रयोगमा आएको थियो । सबैभन्दा पहिला एयरफोनलाई संगीतप्रेमीहरु माझ सार्वजनिक गरिएको थियो । एयरफोन दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा धेरै लोकप्रिय भएको मानिन्छ । सन् २००१ देखि भने एयरफोनको प्रयोग बिस्तारै-बिस्तारै बढ्न थाल्यो । एयरफोनको प्रयोग त्यो समयमा झन् धेरै बढ्न थाल्यो। जब हरेक स्मार्टफोनहरुको खरिदमा एयरफोन दिन थालियो । आज …
एयरफोन : रोगको कारण त बनिरहेको छैन ? Read More »
तनावले पनि पाचनमा समस्या ?
कमजोर पाचन शक्तिसंग सम्बन्धित कुनै रोग जस्तो लिभर, ग्याष्ट्रिक, मधुमेय आदिका कारण हुने गर्दछ । यसबाहेक मानसिक पक्षलाई हेर्ने हो भने तनावले पनि पाचन प्रकृयालाई बिगार्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ, चाहे त्यो तनाव कामसंग सम्बन्धित होस् अथवा कुनै प्रतिस्पर्धासंग । आयुर्वेद तथा मनोवैज्ञानिकदेखि मानसिक रोगहरुका विभिन्न आयामहरुमा जुन भिन्दा–भिन्दै अध्ययनहरु गरिएका छन्, तीनका अनुसार युवा …
तनावले पनि पाचनमा समस्या ? Read More »
कोरोना भाइरस होस् वा अन्य कुनै भाइरस भिटामिन सीले हाम्रो शरीरको प्रप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाई भाइरस माथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ। शरीरलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि भिटामिन सीको आवश्यक पर्छ । शरीरमा भिटामिन सीको कमी भएमा रुघाखोकीको सम्भावना बढ्छ । यसको कमीकै कारण अनुहार असामान्य रुपले चाउरी पर्नुका साथै कपाल झर्ने गर्छ । भिटामिन ‘सि’ले शरीरमा रोग …
शरीरलाई रोग लाग्न नदिने भिटामिन ‘सी’, कुन खानेकुरामा पाइन्छ ? Read More »
खानेकुरा काँचो मीठो हुँदैन । तर, यसको लाभ भने रहेकेा छ । त्यसैले आजभोली दिनहुँ काँचो खानेकुरा लोकप्रिय भएको पाइन्छ । जाडो सयमा त्यति काँचोकचिलो नखाए पनि गर्मी मौसम भने यस्तो खानेकुराका लागि उपर्युक्त समय मानिन्छ । गर्मी मौसममा फलफुल र सागसब्जी पनि पर्यापत पाइन्छन् । काँचो खानेकुरा खाँदा राम्रो तर खानुअघि राम्ररी पखाल्ने वा …
काँचै खानुका ६ फाइदा, फाइदा क्यान्सर देखि तौल घटाउने सम्म Read More »
काठमाडौं – आँपलाई स्वाद र स्वास्थ्यका दृष्टिले ‘फलको राजा’ भन्ने गरिन्छ। गर्मी लागेसगैँ आँपको सिजन पनि सुरु हुन्छ। आँप सबैको प्रिय फल पनि हो। हामी स्वादको लागि आँप खान्छौ। आँपको स्वाद मिठो हुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा नै छ। एउटा आँपमा ८६.१ प्रतिशत पानी, ६.६ प्रतिशत प्रोटिन, ०.३ प्रतिशत खनिज लवण, ११.८ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, १.१ …
यस्ता छन् आँप खानुका फाइदा Read More »
१७ चैत, काठमाडौं । लकडाउनको अवधिभर सेयर बजार बन्द रहने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले लकडाउन अवधिभर बजार खुला नगर्ने निर्णय गरेको हो । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले सरकारले घोषणा गरेको आगामी २५ गतेसम्म नै बजार बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि पुनः …
लकडाउन अवधिभर सेयर बजार बन्द हुने Read More »
१७ चैत, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–१९, पत्थरगञ्जस्थित मिलनटोलमा छ कमला थापाको घर । ४५ वर्षीया कमला घरमा एक्लै बस्छिन् । पछिल्लो दिनमा ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने र वान्ता हुन थालेपछि उनले उपचारका लागि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जाने निर्णय गरिन् । त्यसका लागि बिहान १० बजेदेखि एम्बुलेन्स कुरेकी उनी साँझसम्म अस्पताल जान पाइनन्। ‘श्रीमान् र जेठो …
एम्बुलेन्स कुर्दाकुर्दै दिन बित्यो Read More »
मन्त्री गुरुङको दाबी : खान नपाउने ठाउँमा पठाएका छौं, कोही भोकै पर्दैन
LeaveaComment / खानपान / By admin
१७ चैत, काठमाडौं । सरकारले तत्काल खानै नपाउने अवस्थामा पुगेका विपन्न र विभिन्न सेल्टर होममा बसेका महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई उनीहरु बसेकै ठाउँमा अत्यावश्यक खाद्यान्न पुर्‍याउन थालेको सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन् । अन्य राहतको हकमा लकडाउनको अवधि हेरेर निर्णय गरिने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले अनलाइनखबरसँग बताए । अनलाइनखबरसँगको फेसबुक लाइभमा …
मन्त्री गुरुङको दाबी : खान नपाउने ठाउँमा पठाएका छौं, कोही भोकै पर्दैन Read More »